रैथाने कुकुर भर्सेज बिदेशी कुकुर : कुन बढी कामका ? « News24 : Premium News Channel
रैथाने कुकुर भर्सेज बिदेशी कुकुर : कुन बढी कामका ?
– योगेश कुमार खपाङ्गी/ धेरै भयो नेपालमा जर्मन शेफर्ड, बुल डग, अमेरिकन एस्किमो, अस्ट्रेलियन क्याटल डग आदी थुप्रै जातका बिदेशी कुकुरहरु पाल्ने फेशन चल्न थालेको छ । यस्ता बिदेशी कुकुरहरु एकलाख रुपैयाँ भन्दा बढी मुल्यका हुन्छन् भने प्रतीमहिनाको खर्चको हिसाबले पनि पाल्न लरतरो मान्छे पाल्नुभन्दा पनि महँगो पर्नजान्छ । खान्की, औषधोपचार, नुहाउने साबुन, कपडा, खोर, स्याहार सुसार जती गरे पनि यस्ता बिदेशी कुकुर रैथाने कुकुरभन्दा निक्कै डरछेरुवा प्रबित्तीका हुन्छन्, जस्ले गर्दा यिंनिहरु दिन्भर चन्चल भए पनि रातपरे पछी छपक्क लागेर सुत्छन् तर टोलका रक्षा गर्ने त आखिर रैथाने कुकुरहरु नै हुन् जस्लाई अपमान गर्न ‘भुस्याहा कुक्कुर’ भनिन्छ । यि कुकुर अरुभन्दा आँट्टी पनि हुन्छन् तर यिंनिहरु सडकपेटीमा जन्मिन्छन् र सडकपेटीमै मर्छन् ।
थाहा छ ? यिनीहरुलाई तपाईं-हामीलाईभन्दा टोलको बारे बढी जानकारी हुन्छ । यिनले टोलका सबै मान्छे चिन्छन् । को नयाँ मान्छे – को पुरानो मान्छे यिन्लाई सबै थाहा हुन्छ तर इन्लाई कसैले चिन्दैन । आज कता भतेर छ ? आज कता भेला छ ? इनिहरुलाई पहिले नै थाहा हुन्छ । अझ हाम्रा बुढापाकाले त यिनिहरुलाई टोल-छिमेकमा कसैको मृत्‍यु हुन लागेको छ भने पहिले थाहा हुन्छ रे भन्नुहुन्छ । यिनीहरुको घ्राणशक्ती (सुँघ्ने शक्ती) मान्छेहरुको भन्दा बढी छ, त्यसैले यिनिहरुले मृत्‍युको गन्ध पनि चाल पाउँदा हुन् । शायद तपाईंले पनि सुन्नु भा’को छ होला, त्यस्बेला यिनिहरु नराम्रोसँग रुन्छन् । अचम्मको शक्ती छ हाम्रा रैथाने कुकुरहरुमा !
भोक-भोकै हुन्छन् तर पनि टोलमा चोर पस्यो भने ठुलो हो-हल्ला गरेर टोलबासीलाई सचेत गराउँछन् यिनिहरु ! तपाईंले कहिले यिनलाई एक पुरिया बिस्कुट दिनु भा’को छ ? दिएर हेर्नुस् त; यिनीहरु कती खुशी हुन्छन् । भोलीदेखी तपाईं टोलमा पस्ने बित्तिकै यिनिहरु हर्ष-विभोर हुन्छन् । पुच्छर हलाउँदै आईपुग्छन् स्वागतार्थ !
हामीले कहिले यिन्को कदर गरेनौं तर यिन्ले हाम्रो जहिले नि कदर गर्छन् । यिनीहरु पेट भर्न तपाईं हामी जस्तो देश-बिदेश चाहर्दैनन् । बरु भोकै सुत्छन् तर अर्को टोल सम्म पनि जाँदैनन् । अनेक ताडना र लात सहँदै भए पनि यिनिहरु आफ्नो टोल छोड्दैनन् । यो हो वास्तवमा असली र सच्चा टोल प्रेम !
बिडम्बना नै मान्नु पर्छ, हाम्रै टोलमा बिना शुल्क यती समर्पित र स्वामीभक्त कुकुर हुँदा-हुँदै पनि कथित आधुनिकहरुले लाखौं रुपियाँ खर्च गरेर बिदेशी कुकुरहरु मगाउँछन् । ‘पेडिग्री’ (कुकुरको लागि बनाइएको स्पेशल बिदेशी खाना) भोजन गराउँछन् । गगल्स, सुइटर र टाइ भिराइदिन्छन् । त्यस्का लागि स्पेसल साबुनले नुहाइदिन्छन् । कतिले त एउटा मान्छे (नोकर) नै पनि राखेका हुन्छन् बिदेशी कुकुरको आची सोहोर्न र चाकर गर्न । त्यस्को गालामा म्वाइ खानु, तस्बिर घरमा सजाउनु र सोसल मिडियामा फोटो र भिडियो पोस्ट गर्नु त सामान्य नै भयो । केही नेपाली सेलिब्रेटीहरुले त अचेल युरोपियन र अमेरिकिको देखासिकी महँगो बिदेशी कुकुर लिएर पार्टीमा ‘शो’ गर्न समेत जानथालेका छन् । यस्तो देखासिखीले एकातिर कुकुर खरिदका हाम्रो देशको लाखौं रुपिंया बिदेशिने त छँदै छ, हाम्रा रैथाने कुकुरहरुको कुनै सम्मान, स्याहार सुसार पनि नहुने नै भयो ।
यि बिदेशी कुकुरप्रेमीहरुको अर्को नाटक बुझी नसक्नुको छ; यिनीहरु मर्निङवाक वा इभिनिङवाकको नाममा बिदेशी कुकुर देखाउँदै हिंड्छन् । अनी हाम्रा लोकल/रैथाने कुकुरले भुके भने लट्ठीले मर्ने गरी हिर्काउँछन् वा लात्तले बजार्छन् । असाद्धै टिठ लागेर आउँछ । कठै बिचरा हाम्रा रैथाने कुकुरहरु, जस्ले बर्षको एकपटक भए पनि तिहारमा फूलमाला लगाएर सम्मान पाउँछन् र पुच्छर हल्लाएर खुशी ब्यक्त गर्छन् ।
हालका दिनहरुमा केही स्ट्रीट डग रेस्क्यु टिम पनि सडकमा अलपत्र परेका, खान नपाएका, रोग लागेका कुकुरहरुको उद्धार गर्न सकृय पनि भएका छन् तर त्यो पर्याप्त छैन, अझै परोपकारी ब्यक्ती र संस्थाहरु सकृय हुन जरुरी छ ।